Beled Weyne maxaa muhiim ka dhigay? - BBC News Somali
Beled Weyne maxaa muhiim ka dhigay?
Beled Weyne waa xarunta gobolka Hiiraan. Waa magaalo meesha ay ku taal ay ka dhigeyso mid aad muhiim ugu ah isu socodka dadka iyo ganacsiga Soomaaliya iyo weliba qeybo ka mid ah Ethiopia.
Waxaa mara laba jid oo muhiim ah. Waa waddada isku xirt Soomaaliya Koofur iyo Woqooyi. Iyo jid laami ah oo isku xira Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxayna u dhow dahay soohdinta Soomaaliya iyo Ethiopia.
Waxaa deggan qabaa'il fara badan. Inta badanna siyaasad ahaan magaaladu waxay u qeybsan tahay bari iyo galbeed.
Kuwaas oo beel ahaan ama siyaasad ahaan kala taageera urururro iyo kooxo inta badan aan isku dhan wax u wadin.
Markii dowladdii Maxamed Siyaad Burburtay 1991, intii ka dambeysay waxaa magaalada ka talinayay Qabqablayaal dagaal oo degaanka ah ama ka soo duulay caasimadda.
Markii bartimihii 2006 ay Maxkamaduhu Koofurta Soomaaliya qabsadeen, Beled Weyne waxay ka mid ahayd meelihii ay Maxkamaduhu ku xoogganayeen isla markaana dadka degaanku uu aad u taageeray.
2006 bishii December ayay qabsadeen ciidammada Ethiopia. Dagaalladii iska caabbinta ahaa ee halkaa ka billowdayna waxaa ku dhintay dad aad u fara badan ilaa ciidanka Ethiopia uu ka baxay magaalada Beled Weyne 2008.
Intii ka dambeysay, waxay inta badan Beled Weyne gacanta ugu jirtay al Shabaab, inkasta oo dhowr jeer laga saaray haddana wey ku soo noqotay.
Hadda oo la tilmaamayo ciidanka Ethiopia ee magaalada galay hubka uu saaka isticmaalay xooggiisa iyo dabbaabadaha magaalada is dhex maraya, uma eka in Shabab ay u sahlanaan doonto in ay ku hammiso in ay si fudud Beled Weyne ugu soo laabato. Mana fili karto taageeradii ay muqaawamadu heshay oo kale in ay iyaduna hesho.
Xaaladda maanta taaganina wey ka duwan tahay middii 2006. Berigaas soo gelitaanka ciidanka Ethiopia waxaa aad uga dhiidhiyay Soomaali fara badan o gudaha iyo dibaddaba leh.
Kooxdii horkacaysay oo muqaawamada la baxday, ayaa tusaale noogu filan.
Ciiankeedii iyo Madaxdeedii waxay maanta u qeybsan yihiin dowladda oo iyadu qiran in ay dalbatay ciidanka Ethiopia, al Shabaab oo la dirirsan, Ahlu Sunna oo iyadu Shabaab la dirirta iyo maamul goboleedyo ay ka mid yihiin Ximan iyo Xeeb, Azania iyo Dooxada Shabeelle.
Su'aasha weyn ee hadda taagani waxay tahay, Shabaab magaalada waa laga saaray, laakiin ma la hanan doonaa xasilinta magaalada.
Malliishiyaadka Soomaaliyeed ee la socda ciidanka Ethiopia, oo ay dad magaalada deggani BBC u sheegeen in ay ugu badan yihiin ciidanka Dooxada Shabeelle, sida ay ugu suurta geli doonto xasilinta magaalada iyo weliba dhowrista xuquuqda rayidka oo ay ugu horreyaan nabad gelinta naftooda, sharaftooda iyo hantidooda, taas oo ay wax badania ku xiraan doonaan.